JOXI FREE DOWNLOAD NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Otu n'ime njehie ndị Windows 7 ọrụ nwere ike izute mgbe ịmalite ma ọ bụ wụnye mmemme bụ "Aha nke nsogbu nsogbu ahụ APPCRASH". Ọ na-emekarị mgbe ị na-eji egwuregwu na ngwa "arọ" ndị ọzọ. Ka anyị chọpụta ihe kpatara na nsogbu maka nsogbu kọmputa a.
Ihe kpatara "APPCRASH" na otu esi edozie njehie ahụ
Ihe kpatara nsogbu nke "APPCRASH" nwere ike ịdị iche, mana ha niile jikọtara n'eziokwu na njehie a na-apụta mgbe ike ma ọ bụ njirimara nke ngwaike ma ọ bụ ngwanrọ nke kọmputa anaghị ezute kachasị dị mkpa maka ịme ngwa ngwa. Ọ bụ ya mere njehie a na-ejikarị eme ihe ngwa ngwa na-achọ ọrụ dị elu.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a ga-edozi nsogbu ahụ naanị site na dochie ihe ngwanrọ nke kọmputa (nhazi, RAM, wdg), ndị àgwà ya dị n'okpuru ihe ndị kacha mkpa. Mana ọ na - enwe ike idozi ọnọdụ ahụ n'emeghị omume dị egwu, naanị site na ịwụnye mpaghara ngwanrọ dị mkpa, ịtọzi usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi, wepụ ihe karịrị ibu ma ọ bụ ime manipulations ndị ọzọ n'ime OS. Ọ bụ ụzọ ndị a isi edozi nsogbu a nke a ga-atụle n'isiokwu a.
Usoro 1: Wunye ihe ndị dị mkpa
Otutu mgbe, njehie "APPCRASH" putara n'ihi na komputa enweghi ihe di iche iche nke Microsoft choro ka o soro ngwa. Ọtụtụ mgbe, enweghị nsụgharị nke nsụgharị ndị na-esonụ na-eduga ná nsogbu nke nsogbu a:
Anya C ++ 2013 redist
Soro njikọ dị na listi ahụ ma wụnye components ndị dị mkpa na PC, na-agbaso ndụmọdụ ndị dị na ya "Wizard Wụnye" n'oge usoro nhazi.
Tupu nbudata "Anya C ++ 2013 redist" Ị ga-ahọrọ ụdị sistemụ arụmọrụ (32 ma ọ bụ 64 ibe) na weebụsaịtị Microsoft, site na ịlele igbe dị n'akụkụ "vcredist_x86.exe" ma ọ bụ "vcredist_x64.exe".
Mgbe ị wụnye mpaghara nke ọ bụla, Malitegharịa kọmputa ahụ ma chọpụta otú ngwa nsogbu ahụ si amalite. Maka mma, anyị etinyela njikọ iji budata dịka ugboro ole ihe "APPCRASH" na-ebelata n'ihi na enweghi otu ihe. Nke ahụ bụ, ọtụtụ mgbe, nsogbu ahụ kpatara n'ihi na enweghi ụdị nke DirectX na PC.
Usoro 2: Gbanyụọ ọrụ ahụ
"APPCRASH" nwere ike ime mgbe ị malitere ụfọdụ ngwa, ọ bụrụ na enyere ọrụ ahụ "Njikwa Ngwá Ọrụ Windows Management". Na nke a, ọrụ ahụ a kapịrị ọnụ ga-akwụsị.
Pịa "Malite" ma gaa "Ogwe njikwa".
Pịa "System na Nchebe".
Chọọ ngalaba "Nchịkwa" ma banye n'ime ya.
Na windo "Nchịkwa" Ndepụta nke Windows ngwaọrụ dị iche iche mepee. Kwesịrị ịchọta ihe "Ọrụ" ma gaa na ederede a kapịrị ọnụ.
Malite Onye nlekọta ọrụ. Iji mee ka ọ dịkwuo mfe ịchọta mpaghara dị mkpa, wuo ihe niile dị na ndepụta ahụ dị ka usoro nke mkpụrụ edemede. Iji mee nke a, pịa aha kọmpụ ahụ "Aha". Ịchọta aha na ndepụta "Njikwa Ngwá Ọrụ Windows Management", ṅaa ntị na ọkwa nke ọrụ a. Ọ bụrụ na ihu ya na kọlụm "Ọnọdụ" agwa ya "Ọrụ", mgbe ahụ, ị ​​ga-ehichapụ akụkụ ahụ akọwapụtara. Iji mee nke a, pịa aha aha ugboro abụọ.
Njirimara windo ọrụ na-emepe. Pịa n'ubi Ụdị mmalite. Na ndepụta na-egosi, họrọ "Nkwarụ". Wee pịa "Kwadoro", "Tinye" ma "OK".
Laghachi na Onye nlekọta ọrụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, ugbu a na-abụghị aha "Njikwa Ngwá Ọrụ Windows Management" àgwà "Ọrụ" na-efu, na àgwà a ga-ebe kama. "Nkwusioru". Malitegharịa ekwentị ahụ ma gbalịa ịmalitegharia ngwa nsogbu ahụ.
Usoro nke 3: Lelee iguzosi ike n'ezi nke faịlụ Windows
Otu n'ime ihe kpatara "APPCRASH" nwere ike imebi iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ Windows. Mgbe ahụ ịkwesịrị iṅomi usoro ọrụ a wuru. "SFC" ọnụnọ nsogbu ahụ dị n'elu, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dozie ya.
Ọ bụrụ na ị nwere diski nwụnye Windows 7 na atụ nke os arụnyere na kọmputa gị, mgbe ịmalite usoro ahụ, jide n'aka na itinye ya n'ime ụgbọala. Nke a ga - achọpụtaghị mmebi nke iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro faịlụ, ma doziekwa njehie na nchọpụta ha.
Pịa ọzọ "Malite". Soro edemede ahụ "Mmemme niile".
Gaa na nchekwa ahụ "Ụdị".
Chọta ihe "Iwu Iwu" na nri aka nri (PKM) pịa ya. Site na ndepụta, kwụsị nhọrọ na "Na-agba ọsọ dị ka onye nlekọta".
Interface meghere "Iwu iwu". Tinye okwu na-esonụ:
Mmalite na-amalite "SFC"nke nyochaa usoro faịlụ maka iguzosi ike n'ezi ihe na njehie ha. Ọganihu nke ọrụ a gosipụtara ozugbo na windo. "Iwu iwu" dị ka pasent nke ụda ọrụ niile.
Mgbe arụchaa ọrụ ahụ "Iwu iwu" ozi ọhụụ na-egosi na ekwupụtaghị na iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ faịlụ ahụ, ma ọ bụ ozi banyere njehie na mkpebi nkowa ha. Ọ bụrụ na ị tinyelarị diski nwụnye osị na diski disk, mgbe ahụ, a ga-edozi nsogbu niile na nchọpụta. Jide n'aka na ịmalitegharịa kọmputa mgbe nke a gasịrị.
E nwere ụzọ ndị ọzọ iji lelee iguzosi ike n'ezi ihe nke faịlụ faịlụ, nke a na-atụle na ihe ọmụmụ dị iche.
Ihe Ọmụmụ: Ịlele nsụgharị nke faịlụ faịlụ na Windows 7
Usoro nke 4: Kwalite Ihe Mmekọrịta
Mgbe ụfọdụ, enwere ike ịmehie njehie ahụ "APPCRASH" n'ihi nsogbu ndị na-akwado ya, ya bụ, nanị ikwu okwu, ma ọ bụrụ na mmemme ahụ na-agba ọsọ adịghị adaba na nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ gị. Ọ bụrụ na achọrọ usoro ọhụrụ nke OS ka ị malite ngwa nsogbu, dịka ọmụmaatụ, Windows 8.1 ma ọ bụ Windows 10, ọ nweghị ihe a ga-eme. Iji malite, ị ga-arụrịrị ma ọ bụrụ ụdị OS chọrọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ya emulator. Ma oburu na ejiro ngwa ahu maka usoro ndi ozo na mbu ma ya mere ogbagwoju na "asaa" ahu, nsogbu bu ihe di mfe idozi.
Meghee "Explorer" na ndekọ ebe ebe ntinye akwụkwọ nke nsogbu ahụ dị. Pịa ya PKM ma họrọ "Njirimara".
Njirimara windo faịlụ ahụ mepee. Gaa na ngalaba "Njikọ".
Na ngọngọ "Ọnọdụ mmekọrịta" tinye akara na nso ọnọdụ "Gbanwee usoro ihe omume ahụ na ọnọdụ mmekọrịta ...". Site na ndetu ndepụta, nke ga - abanye na oru, họta usoro OS achọrọ nke kwekọrọ na ngwa a. N'ọtụtụ ọnọdụ, na ụdị njehie dị otú ahụ, họrọ ihe ahụ "Windows XP (Service Pack 3)". Cheekwa igbe dị n'akụkụ "Gbaa usoro a dịka onye nchịkwa". Wee pịa "Tinye" ma "OK".
Ugbu a, ị nwere ike ịmepụta ngwa ahụ site na iji usoro ịhazi site na ịpị ugboro abụọ na faịlụ ya nwere ike igodo bọtịnụ aka ekpe.
Usoro 5: Ọkwọ ụgbọala di elu
Otu n'ime ihe kpatara "APPCRASH" nwere ike ịbụ n'eziokwu na PC nwere ndị ọkwọ ụgbọala kaadị vidio arụpụtara ma ọ bụ, ihe na-eme ọtụtụ ugboro karịa, kaadị dị mma. Mgbe ahụ ịkwesịrị imelite ihe ndị kwekọrọ na ya.
Gaa na ngalaba "Ogwe njikwa"nke a na-akpọ "System na Nchebe". A kọwara ntughari algorithm nke mgbanwe a Usoro 2. Ọzọ, pịa akara ngosi "Onye njikwa ngwaọrụ".
The interface amalite. "Onye njikwa ngwaọrụ". Pịa "Ihe ntaneti vidiyo".
Ndepụta nke kaadị vidiyo ejikọrọ na kọmputa ahụ mepee. Pịa PKM site na aha ihe ma họrọ site na listi "Melite ndị ọkwọ ụgbọala ...".
Mmalite melite mepee. Pịa na ọnọdụ "Ọkwọ ụgbọala na akpaaka ...".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-arụ ọrụ nyocha ọkwọ ụgbọala ahụ. Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụpụta mmelite ahụ, gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye na-emepụta vidiyo gị, budata onye ọkwọ ụgbọala ahụ n'ebe ahụ ma mee ya. A ghaghị ime usoro yiri ya na ngwaọrụ ọ bụla nke na-egosi na "Dispatcher" na ngọngọ "Ihe ntaneti vidiyo". Mgbe echichi, echefula ịmalitegharịa PC.
A na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala dị egwu n'otu ụzọ ahụ. Nani maka nke a, ị ga-aga na ngalaba "Ụda olu, vidio na egwuregwu" ma melite ihe ọ bụla nke otu a n'otu aka.
Ọ bụrụ na ịnweghị onwe gị dịka onye nwere ahụmahụ nke ọma iji mee ka ndị ọkwọ ụgbọala nwee mmelite n'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike iji software ahụ pụrụ iche, DriverPack Solution, rụọ ọrụ a. Ngwa a ga-iṅomi kọmputa gị maka ndị ọkwọ ụgbọala oge ochie ma nye gị ịwụnye nsụgharị ọhụrụ ha. N'okwu a, ọ bụghị naanị ịkwado ọrụ ahụ, mana ị ga-azọpụkwa onwe gị ka ị ghara ile anya "Onye njikwa ngwaọrụ" ihe dị mkpa maka imelite. Usoro ihe a ga-eme nke a na-akpaghị aka.
Ihe ọmụmụ: Imelite ndị ọkwọ ụgbọala na PC site na iji DriverPack Solution
Nzọụkwụ 6: Wepụ ihe odide Cyrillic site na ụzọ na nchekwa ihe omume ahụ
Mgbe ụfọdụ, ọ na - eme na ihe kpatara njehie ahụ bụ "APPCRASH" bụ mgbalị iji wụnye usoro ihe omume ahụ na ndekọ, ụzọ nke nwere ihe odide ndị anaghị agụnye mkpụrụokwu Latin. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ na-edekarị aha ndekọ aha na Cyrillic, ma ọ bụghị ihe nile etinyebere na ndekọ dị otú ahụ nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. N'okwu a, ịkwesịrị ịtinye ha na folda, ụzọ nke na-enweghị ihe odide Cyrillic ma ọ bụ ihe odide nke mkpụrụ akwụkwọ ọzọ ọzọ karịa Latin.
Ọ bụrụ na i tinyeworị usoro ihe omume a, mana ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, na-enye njehie "APPCRASH", wee wepụ ya.
Na-agagharị na "Explorer" na ndekọ mgbọrọgwụ nke diski ọ bụla anaghị arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ. N'iburu n'uche na ọ bụ mgbe niile ka esiri arụmọrụ OS na disk ahụ C, ị nwere ike ịhọrọ akụkụ ọ bụla nke draịvụ ike, ma e wezụga nhọrọ ahụ dị n'elu. Pịa PKM na ebe efu na windo wee họrọ ọnọdụ "Mepụta". Na ntinye nhọrọ, gaa na ihe ahụ "Nchekwa".
Mgbe ị na-edepụta nchekwa, nye ya aha ọ bụla ịchọrọ, ma na ọnọdụ ọ ga-abụ nanị mkpụrụ edemede Latịn.
Ugbu a, weghachite ngwa nsogbu ahụ na folda ahụ e kere eke. Maka nke a na "Wizard Wụnye" na ọkwa kwesịrị ekwesị nke nrụnye, kọwaa ndekọ a dịka ndekọ ahụ nwere faịlụ nke ngwa ahụ. N'ọdịnihu, tinye nsogbu na "APPCRASH" na nchekwa a mgbe niile.
Usoro nke 7: nhichapụ aha
Mgbe ụfọdụ iwepu njehie "APPCRASH" na-enyere aka dịka ntanye dị ka ihichapụ ndekọ ahụ. Maka nzube ndị a, enwere ọtụtụ ngwanrọ dị iche iche, ma otu n'ime ngwọta kasị mma bụ onye nchịkọta ihe.
Na-agba ọsọ nchịkọta. Gaa na ngalaba "Aha" ma pịa bọtịnụ ahụ "Nchọpụta Nsogbu".
Usoro ndekọ scan ga-arụ ọrụ.
Mgbe usoro ahụ zuru ezu, windo CCleaner na-egosiputa ndenye ndekọ ndekọ ọjọọ. Iji wepu ha, pịa "Idozi ...".
A windo mepee nke a na-enye gị iji mepụta ndabere nke ndekọ. A na-eme nke a ma ọ bụrụ na mmemme ahụ na-ahapụ ụzọ ọ bụla dị mkpa. Mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume iweghachi ya ọzọ. Ya mere, anyị nwere ike ikwu na ịpị bọtịnụ ahụ na windo ahụ akọwapụtara "Ee".
Idozi nchekwa ndabere ga-emepe. Gaa na ndekọ ebe ịchọrọ idebe otu, wee pịa "Chekwa".
Na window nke ọzọ, pịa bọtịnụ ahụ "Idozi akara".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-edozi njehie ndekọ niile, a ga-egosipụtakwa ozi na CCleaner.
E nwere ngwaọrụ ndị ọzọ maka ihicha ndekọ ahụ, nke a kọwara na isiokwu dị iche.
Hụkwa: Usoro kachasị mma maka nhicha ndekọ ahụ
Usoro 8: Gbanyụọ DEP
Na Windows 7, arụ ọrụ DEP, nke na-enye aka ichedo PC gị site na koodu ọjọọ. Ma, mgbe ụfọdụ, ọ bụ isi ihe kpatara "APPCRASH". Mgbe ahụ ịkwesịrị ịhapụ ya maka ngwa nsogbu ahụ.
Gaa na ngalaba "System na Nchebe"kwadoro naOgwe njikwa ". Pịa "Usoro".
Pịa "Ntọala usoro ntọala".
Ugbu a na otu "Arụ ọrụ" pịa "Nhọrọ ...".
Na shea na-agba ọsọ, gaa na mpaghara ahụ "Gbochie Data Execution".
Na windo ohuru, megharịa bọtịnụ redio ka DEP nwee ohere maka ihe niile ma e wezụga ndị ahọrọ. Ọzọ, pịa "Tinye ...".
A windo mepee nke ị ga-aga na ndekọ ebe faịlụ nwere ike ịmepụta maka nsogbu nsogbu ahụ, họrọ ya wee pịa "Meghee".
Mgbe aha nke usoro ahọrọ ahụ gosipụtara na windo arụmọrụ arụmọrụ, pịa "Tinye" ma "OK".
Ugbu a ị nwere ike ịnwa ịmalite ngwa ahụ.
Usoro 9: Gbanyụọ Antivirus
Ihe ọzọ kpatara njehie "APPCRASH" bụ esemokwu nke ngwa a na-ebido site na programmụ antivirus nke arụnyere na kọmputa ahụ. Iji chọpụta ma nke a dị, ọ bụ ihe ezi uche iji wepụ antivirus na nwa oge. N'ọnọdụ ụfọdụ, maka ngwa ahụ iji rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi, achọrọ iwepụ kpamkpam ngwanrọ nchedo.
Onye ọ bụla antivirus nwere ya deactivation na uninstallation algorithm.
Gụkwuo: Nsogbu nke nwa oge na-egbochi nje virus.
Ọ dị mkpa icheta na ọ gaghị ekwe omume ịhapụ kọmputa ruo ogologo oge na-enweghị nchebe nje nje, ya mere, ọ dị oké mkpa ka ị wụnye mmemme yiri nke ahụ ozugbo i wepụsịrị usoro antivirus ahụ, nke na-agaghị emegide software ndị ọzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ezigbo ihe kpatara ya mgbe ị na-agba ụfọdụ omume na Windows 7, njehie "APPCRASH" nwere ike ime. Ma ha niile na-edina na ekweghị ekwe nke ngwanrọ a na-agba ọsọ na ụfọdụ ụdị ngwanrọ ma ọ bụ ihe ngwaike. N'ezie, iji dozie nsogbu, ọ ga-akacha mma ozugbo ịmepụta ihe kpatara ya. Ma ọ dị mwute ikwu na nke a anaghị ekwe omume mgbe niile. Ya mere, ọ bụrụ na ị zutere njehie ahụ dị n'elu, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị tinye usoro niile edere n'isiokwu a iji wepụ nsogbu ahụ.